Maazi Wu ： +8615355683259
Onye na -ama jijiji n'ihu
Onye na -agba ọgba tum tum
Azụ Shock Absorber
Onye na -eku ume ikuku
Batrị ọgba tum tum eletrik ọ ga -enweta mmiri? Gịnị ka anyị kwesịrị ime mgbe idei mmiri gasịrị?
N'ime ọnwa ndị na -adịbeghị anya, a na -enwekarị mmiri ozuzo n'ụwa niile. Onye ọ bụla ga -ezute mmiri ozuzo nke ọgba tum tum eletrik. Ọtụtụ oge, enweghị nsogbu, mana ụfọdụ ndị enyi enweghị ike ịmalite ọgba tum tum eletrik mgbe mmiri ozuzo gasịrị? Yabụ kedu ihe ọgba tum tum eletrik na -enweta mmiri? Otu esi ...
Ụlọ ọrụ ụgbọ ala TVS ga -ebupute ụdị ọgba tum tum Apache RR 310 na India na 2021.
TVS Motor Company ga -ebupute ụdị ọgba tum tum Apache RR 310 na India na 2021 echi (Ọgọst 30). A na -atụ anya na ọgba tum tum na -abịanụ ga -enwe mgbanwe ịchọ mma, nye ntọala nkwusioru gbanwere, na ịwụnye ECUs maka nzaghachi ka mma. Ọ kwesịrị inweta ike site na 3 ...
Nchekwa nke ịnyịnya ígwè na ndị skuuta ga -asọpụrụ iwu okporo ụzọ Lincoln
Ndị uwe ojii Lincoln na -echetara ọha na eze ka ha rube isi n'iwu okporo ụzọ mgbe ha na -agba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ ndị skuuta gburugburu Lincoln. N'ime mkpesa ndị uwe ojii na July, Onye isi ndị uwe ojii Lincoln Paul Adams nyere ụfọdụ ndụmọdụ, na -achọ ka ndị mmadụ na -eji ịnyịnya ígwè ma ọ bụ skuuta ịgbaso ntuziaka okporo ụzọ wee kwụsị kpamkpam na ...
Onye na -emepụta ụgbọ ala German BMW Motorrad gosipụtara nnukwu skuuta C 400 GT na India
Onye na -emepụta ụgbọ ala German BMW Motorrad gosipụtara nnukwu skuuta C 400 GT na India, na -egosi na a ga -ebido ya n'oge adịghị anya. N'ihe banyere isi ihe, ụgbọ ala ahụ nwere atụmatụ radical, kwadebere ya na ngwa ngwa Bluetooth yana ọkụ ọkụ LED. Ọ na-enweta ike ya site na 350cc single-cylinder liquid-co ...
Arụmọrụ nke mmanụ na -awụ akpata oyi n'ahụ
1. Ebe oyi na -atụ mmanụ mmanụ ujo ejiri na China agaghị adị ala karịa - 40 ℃. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, mgbe ọnọdụ okpomọkụ gbadara 0 ℃ ～ - 40 ℃ n'oge oyi, mmanụ ekwesịghị ịlafu mmiri ya. Ndị enyi sitere na mba dị iche iche nwere ike họrọ mmanụ dịtụ ujo dị ka t ...
Nlekọta kwa ụbọchị na ịkpachara anya nke ọgba tum tum n'ihu ujo absorber
Nlekọta anya maka iji ihe mmachi ihu n'ihu kwa ụbọchị: Hichaa sedimenti na ngalaba njem n'oge mkpuchi mkpuchi uzuzu na akara mmanụ nke ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ bụ akụkụ rọba, na imebe egbugbere ọnụ nwere ike izute ihe ndị na-egbochi uzuzu kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ịkpọtụrụ ogologo irighiri ihe ka ga-egbochi ...
Ụdị nke ọgba tum tum ujo
Dị ka anyị niile maara, ihe na -awụ akpata oyi n'ahụ bụ akụkụ dị mkpa nke ọgba tum tum ahụ. Ọrụ ya bụ ibelata na ibelata mmetụta na ịma jijiji nke ọgba tum tum ahụ n'oge usoro ịnya ụgbọ ala n'ihi ụzọ adịghị akwụ ọtọ, yana ịhụ na ịdị nro na nkasi obi nke ịnya ụgbọ ala, nke bara uru iji meziwanye ...
Ahọrọla Öhlins Racing ka ọ bụrụ onye na -ebubata ihe ọghọm maka ụgbọ ala NASCAR® Cup “ọgbọ na -abịa”.
Hendersonville, North Carolina, Mee 25, 2021 Öhlins Racing bụ onye enyemaka nke Tenneco (NYSE: TEN) na ndị na-eweta teknụzụ nkwusioru nkwusioru nkwusioru, nkwanye ugwu, na n'okporo ụzọ a na-akwanyere ùgwù, ka ahọpụtara ka ọ bụrụ naanị onye na-eweta NASCAR®. Cup usoro nke ujo absorbers maka ...
Foto otu ndị ọrụ ụfọdụ
site na nchịkwa na 20-08-26
Onye isi njikwa Wu Yunfu kwuru okwu nnabata na ọgbakọ ahụ. Ọ nabatara ndị ọbịa niile ọmarịcha ekele ma kelee ha maka nkwado ogologo oge ha maka mmepe Lujury, wee webata ọnọdụ mmepe ugbu a na atụmatụ ọdịnihu Lujury na com ...
Debanye aha n'akwụkwọ akụkọ anyị: